ubuntu မှာ gtalk သုံးချင်လို့........
Subject: ubuntu မှာ gtalk သုံးချင်လို့........ Sun Dec 27, 2009 9:47 am
firefox ကနေ gtalk exe file ကို download ဆွဲပီးပါပီ....
wine ဆိုတဲ့ package ကိုလဲ install လုပ်ပီးပီပါပီး....
ဒါပေ့မယ့် gtalk ကို install လုပ်တော့ archive manager ကနေ ဒီ error လေးပေါ်လာပါတယ်..
အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သိချင်လို့ပါ...
Subject: Re: ubuntu မှာ gtalk သုံးချင်လို့........ Sun Dec 27, 2009 11:39 am
ဂိုဂယ်က gtalk ကို လင်းနစ်အတွက် ထုတ်မပေးထားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ gtalk မသုံးပဲနဲ့လည်း တခြား ဆော့ဝဲလ်တွေနဲ့ အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်။ အရင်က pidgin ကို ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပြီး အခုနောက်ပိုင်း empathy ကို ပြောင်းလဲ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကတော့ www.ubuntu4mm.org မှာ တချက် သွားကြည့်လိုက်ပါ။ ဘာမှ မခက်ပါဘူး။ ဆော့ဝဲလ်သွင်းစရာလည်း မလိုပါဘူး။ ပါပြီးသားတွေပါ။ လိုအပ်တာလေးတွေ ဖြည့်ပြီး သုံးယုံပါပဲ။
p.s (Wine သွင်းပြီးတော့ gtalk ရမ်းရင်တော့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။)
Subject: Re: ubuntu မှာ gtalk သုံးချင်လို့........ Sun Dec 27, 2009 1:10 pm
အကို မသိလို့ မေးမယ်နော်....
linux မှာ wine ဆိုတဲ့ package ကို install လုပ်ပီးပီဆိုရင်
window မှာသုံးတဲ့ exe file တွေကို install လုပ်လို့ ရပီမဟုတ်လား?
window မှာသုံးတဲပ program file တွေကို install လုပ်လို့ ရပီမဟုတ်လား?
အဲဒါလေး ကွဲပြားအောင် ရှင်းပြပေးပါနော်...
Pidgin မှာလဲ gtalk ကို install လုပ်ပါတယ်...
ဖြစ်နိုင်ရင် Pidgin မှာ gtalk install လုပ်ပုံကို ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်...
Subject: Re: ubuntu မှာ gtalk သုံးချင်လို့........ Mon Dec 28, 2009 11:55 am
Wine ကို သုံးပြီး လင်းနစ်မှာ ၀င်းဒိုး ပရိုဂရမ်တော်တော်များများကို သွင်းလို့ ရတယ်လို့ ပြောတာပါ။ အားလုံးကို သွင်းလို့ ရတယ်လို့ ဆိလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ၀င်းဒိုးနဲ့ လင်းနစ်က ဖွဲ့စည်းပုံခြင်း လုံးဝမတူပါဘူး။ ဒါကြောင့် wine သုံးတိုင်း .exe ဖိုင်အားလုံးကို ၀င်းဒိုးမှာလို အသုံးပြုနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းနဲ့ အများ လိုအပ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အခု ဥဘွန်းတူ ၉.၁၀ ကစလို ထင်တယ် ဥဘွန်းတူ အဖွဲ့က pidgin အစား empathy ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုထားပါတယ်။ Empathy မှာက pidgin ထက်သာတဲ အပိုင်းတွေ များပါတယ်။ အဓိက ကတော့ voice chat နဲ့ webcam chat အသုံးပြုနိုင်တာပါပဲ။
pidgin အသုံးပြုပြီး gtalk သုံးနည်းကို ဘလော့မှာ ရေးထားပါတယ်။ သွားရှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ pidgin သဘောတရားကို နားလည်ရင် empathy လည်း ဒီသဘောအတိုင်းပါပဲ။ လင်းနစ်ကို စတင်လေ့လာဖို့ စိတ်ကူးရှိပြီဆိုရင် အနည်းနဲ့ အများတော့ www.ubuntu4mm.org မှာ နည်းနည်း သွားရောက်လေ့လာဖတ်ရှု့ပေးပါ။ အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော် ကျောင်းစာတွေနဲ့ မအားလို့ ပို့စ်အသစ်တွေ မတင်နိုင်ပေမဲ့ လင်းနစ်(အဓိက အားဖြင့် ဥဘွန်းတူ) လေ့လာချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတို့ အလွယ်ကူဆုံး မြန်မာလို မြန်မြန်ဆန်ဆန် လေ့လာနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။
Subject: Re: ubuntu မှာ gtalk သုံးချင်လို့........